ရဟန်းအယောင်ဆာင် ဘုန်းကြီးအတုတွေ နာပြီ - Real Gaming Myanmar
ရဟန်းအယောင်ဆာင် ဘုန်းကြီးအတုတွေ နာပြီ
14 4.2019နံနက်( ၉း၀၀) နာရီအချိန်ခန့်ရန်ကင်းရာအိမ်မူးအဖွဲ့မှရဟန်းတစ်းပါး မူးပြီးအိပ်နေကြောင်းဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်သတင်းပို့တိုင်ကြားမူကြောင့်ထီးလင်းကျောင်းမှဦးစန္ဒာသီရိ ဦးတေဇနိယ နှင့် ကိုကျော်ထူး(ထီးလင်း)တို့ မှ သွားရောက်ကြည့်ရှု့လိုအပ်တာစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတိတိကျကျဘာမှဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိ…မော်ဟန် ကျောင်းမှဟု ပြောဆိုသည့်အခါ မော်ဟန်ဆရာတော်ကို ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းရာ မော်ဟန်ဆရာတော်မှ ဆရာတော်ကျောင်းမှ မဟုတ်ကြောင်းဆက်လက်သိရှိရပါသည်..
ထို့နောက် မြို့နယ်သံဃနာယက ဥက္ကဌ ဆရာတော် နှင့် မော်ဟန်ဆရာတော် ဦးဝိဇယ ထံဆက်သွယ်ပြီး သြဝါဒ ခံယူကာ ရန်ကင်း ရာအိမ်မှူး များရှေ့တွင် အကျီနှင့် ပုဆိုး ပေးကာ လူဝတ်လှဲစေပြီး …ကြိမ်ဒဏ် (၁၀ )ချက် ပေးကာရဲစခန်းသို့ပို့ဆောင် ခဲ့သည်..
Credit. . CKK
14 4.2019နံနကျ( ၉းဝ၀) နာရီအခြိနျခနျ့ရနျကငျးရာအိမျမူးအဖှဲ့မှရဟနျးတဈးပါး မူးပွီးအိပျနကွေောငျးဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျသတငျးပို့တိုငျကွားမူကွောငျ့ထီးလငျးကြောငျးမှဦးစန်ဒာသီရိ ဦးတဇေနိယ နှငျ့ ကိုကြျောထူး(ထီးလငျး)တို့ မှ သှားရောကျကွညျ့ရှု့လိုအပျတာစဈဆေးမေးမွနျးပွီးတိတိကကြဘြာမှဖွကွေားနိုငျခွငျးမရှိ…မျောဟနျ ကြောငျးမှဟု ပွောဆိုသညျ့အခါ မျောဟနျဆရာတျောကို ဆကျသှယျပွီးမေးမွနျးရာ မျောဟနျဆရာတျောမှ ဆရာတျောကြောငျးမှ မဟုတျကွောငျးဆကျလကျသိရှိရပါသညျ..
ထို့နောကျ မွို့နယျသံဃနာယက ဥက်ကဌ ဆရာတျော နှငျ့ မျောဟနျဆရာတျော ဦးဝိဇယ ထံဆကျသှယျပွီး သွဝါဒ ခံယူကာ ရနျကငျး ရာအိမျမှူး မြားရှတှေ့ငျ အကြီနှငျ့ ပုဆိုး ပေးကာ လူဝတျလှဲစပွေီး …ကွိမျဒဏျ (၁၀ )ခကျြ ပေးကာရဲစခနျးသို့ပို့ဆောငျ ခဲ့သညျ..
Previous: ဇလုံတောင် ​တောင်တက်ဘုရားဖူကား ဘရိတ်ပေါက် တိမ်းမှောက်ပြီး ၃ ဦး​နေရာတွင်​​သေဆုံး….
Next: 2000 Vs 2010 ခုနှစ်တွေက ထိပ်တန်းမင်းသားတွေရဲ့ ရုပ်ရည်တွေကို ယှဉ်တွဲပြသ